Accueil > Gazetin'ny nosy > Filoham-pirenena: Iza ilay olom-baovao tokony hofidina ?
Filoham-pirenena: Iza ilay olom-baovao tokony hofidina ?
Amin’izao fotoana izao dia very fanahy mbola velona tanteraka ny vahoaka Malagasy amin’ny afitsok’ireo mpitondra nifandimby teto amin’ny firenena hatramin’izay. Be filaza daholo izy rehetra rehefa manao fampielezan-kevitra sy mbola aty ivelan’ny fitondrana, fa rehefa mahazo toerana dia tsy nisy notanterahina ny vavabe natao ireny. Dia leo sy kivy tanteraka ny Malagasy mahita ny mpanao pôlitika. Ny mpanao politika izay sokajian’ny olona ho mpandainga, mpangalatra sy mpamita-bahoaka ary mpihatsara ivelatsihy.
Omaly alakamisy faha 25 janoary 2018 dia namory olona maro teny Iavoloha ingahy Hery Rajaonarimampianina. Hanao tomban’ezaka ny zava-bita tao anatin’ny efa-taona nitondrany ny firenena hono ary hisarika ny olona mbola hifidy azy indray. Tsara dia tsara izany satria ilaina saingy fanesoana no re tetsy sy teroa raha naheno izany. Toa izao no nolazain’ny olona amin’izany amin’ny teny fohy hoe : “nampisotro mangidy ny Malagasy ity filoha ity ka inona indray no holazainy eo ?”
Midika avy hatrany izany fa tsy ingahy Rajaonarimampianina intsony no olona tadiavin’ny Malagasy hitantana ny firenena. Asa na mba mahalala izany ity filoha ity na tsia, na dia mbola voafitakin’ny mpanolotsaina sy ireo mpitanty ran-kena ihany ka manantena fa mbola tia azy ny Malagasy? Tsia dia tsia no valin’izany.
Manao angoan-tenda koa ingahy Ravalomanana Marc filoham-pirenena naongan’ny olona tamin’ny taona 2009 ka nahatonga ny fanjakana tetezamita teto Madagasikara hatramin’ny taona 2014. Mbola mieritreritra ny hibabo fanjakana hatrany hatramin’izao ingahy Ravalomanana Marc na dia efa voasazin’ny fitsarana ary voaheloka fa mpamono olona ny taona 2010. Raha sendra manao fitsidiham-paritany ity filoha teo aloha ity dia mbola misedra olana amin’ny olona izay nampitondrany faisana tamin’ny fotoana nitondrany ka mandroaka azy.
Ankilany, manomboka miseho vahoaka indray ingahy Andry Nirina Rajoelina izay filohan’ny tetezamita teo aloha. Mpiara-miasa akaiky tamin’ingahy Hery Rajaonarimampianina ary nanao azy minisitra ny Vola tamin’izany fotoana izany noho ny fifampitokisana sy ny fitiavana. Mbola ingahy Andry Nirina Rajoelina no nanosika ity filoha ankehitriny ity ho filoham-pirenena eran’i Madagasikara izay nampitondra faisana ny Malagasy izao. Lazain’ny mpandinika fa tsikombakomban’izy roalahy no zava-misy ataon’i Hery Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao.
Tamin’ny fitondran’izy telo lahy filoham-pirenena sy filoham-panjakana ireo no nanjaka tanteraka ny fangalarana volam-panjakana nataon’ny olona mpitondra ambony teto amin’ny firenena. Toa izany koa ny kolikoly avolenta nataon’ny mpitondra fanjakana hatrany amin’ny mpiasam-panjakana ambony ka hatramin’ny ministra ary hatramin’ny olona manodidina ny filoham-pirenena. Ohatra amin’izany ny raharaha Claudine Razaimamonjy, ny raharaha andramena izay olona ambony tao amin’ny fanjakana avokoa no voarohirohy amin’izany hatrany amin’ny andron’ingahy Ravalomanana, Andry Nirina Rajoelina ary hatramin’izao andron nitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina izao. Amintsika miteny izao dia mbola arahan’ny maro akaiky hatrany ivelany ka hatreto Madagasikara ny raharaha Houcine Arfa. Maro no azo lazaina fa ireo no hanaporofointsika ny zava-misy ankehitriny.
Tsy izany ihany fa ireo filoha telo lahy ireo koa no mpitondra firenena tsy nanaja ny Lalàmpanorenana indrindra ary nivadika tamin’ny sonia nataony. Raharaha Dakar 2001, fifanarahana tany Addis Abeba tamin’ny 2009, ary ny tsy fanajana ny Lalàm-panorenana amin’izao fitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina izao. Hatramin’ny FFKM (Fiombonan’ny fiangonana kristianina eto Madagasikara) izay nangaihay sy menatra noho ny tsy fanatanterahana ny fifanarahana natao teny CCI Ivato tamin’ny taona 2014, izay noheverina fa hamahana ny olana ara-pôlitika sy ny krizy lavareny eto Madagasikara hatramin’izay.
Iza no olona vaovao, tsy mpangalatra, manana traikefa amin’ny fitondrana raharaham-panjakana ka na tsy nanao pôlitika aza dia nianatra sy niofana amin’izany ? Iza no olona matahotra an’Andriamanitra ka tsy hamiravira ny fananam-pirenena sy hangalatra ny volam-panjakana toa ny misy tamin’ny fanjakana telo nifandimby teto Madagasikara nanomboka tamin’ny taona 2001 ka hatramin’izao fotoana izao? Iza no olona tia fihavanana ka tsy hanavakavaka ny Malagasy isam-paritra sy ara-pirazanana? Iza ilay olona tsy ho voabaikon’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ka hijery ny tombotsoam-pirenena aloha ny zavatra rehetra. Iza ilay Malagasy afaka hitondra ny Malagasy amin’ny tena fampandrosoana tsy mitanila eto Madagasikara?
Manana olon-kendry sy mahay ary tia tanindrazana isika ka aoka hiseho izy ireny mba hialana amin’ny fifidianana olona isaka ny hisy fifidianana toa ny nitranga taamin’ny fotoanan’ireo mpitondra telo ireo.
Izany no filoham-pirenena takian’ny Malagasy amin’izao fotoana izao ka samia mandinika tsara.